DAAWO VIDEO:Muuse Biixi oo xaqiijiyey Qorshaha RW Abey ee Raysal wasaare Khayre Ku tagayo Hargeysa Iyo wada Hadalada. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay qorshaha cusub ee la shaaciyay in uu Ra’iisal wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed uu ku wajahayo wada-hadalada Somaliland iyo Soomaaliya ee muddada badan hakadka ku jira.
Madaxweyne Biixi ayaa maanta warbaahinta la hadlay, isagoo ay bar-bar joogeen Guddoomiyeyaasha labada gole iyo labada guddoomiye ee xisbiyada mucaaridka Somaliland, wuxuuna sheegay inay diyaar u yihiin in dib loo furo wada-hadaladaasi.
Ayada oo wararka ay sheegayaan in Abiy Ahmed uu doonayo inuu kulansiiyo Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo Muuseo Biixi, maadaama reer Somaliland “ay xasaasiyada ka qabaan” madaxweyne Farmaajo, ayaa Muuse Biixi wuxuu carabka ku adkeeyay in xukuumadiisu ay diyaar u tahay wada-hadal ay la gasho dowladda federaalka, midaasi oo u muuqata inuu si dad-ban u aqbalay uguna diyaar yahay qorshihii Abiy Ahmed.
Biixi ayaa sheegay in cudurka dunida ku habsaday ee Coronavirus uu xiligan waxkasta ka muhiimsan yahay ka hortagidiisu, balse xiligeeda ay diyaar u yihiin wada-hadalada Somaliland iyo Soomaaliya, iyadoo la iskugu imanayo fagaaro caalamiya.
Previous articleDegdeg:- Dowladda Jabuuti oo shaacisay Dhimashadii ugu horreysay ee cudurka Coronavirus.
Next articleSAWIRO:- Dowladda Somalia oo ciidamo badan geysay Xuduuda Dalka Itoobiya.
Ismail Hassan Mire April 9, 2020 At 7:53 pm
Ma qiimo weyn bay kuugu fadhidaa in PM Khayre Hargeisa la dego oo la googooyo
Boodhari April 9, 2020 At 8:04 pm
Biixi iyo qawleysatada jabhadda SNM gabbalkoodii waa uu dhacay. Qaddiyaddoodii faasidka ahayd iyana way la hooyatay waayo diinta, dhaqankeena, iyo dunida casrigan ah boos uga ma bannaana xaqiqdii. Sidii aan sanad ka hore saadaaliyay iyada oo aanay bar dhiig ahi dhulka ku dhibcin ayaa qummaati looga takhalusayaa sababta oo ah khayaalka si kasta oo qiiqiisa loo oogo marka waaqiciga dhabta ah ay is taabtaan dan buu u zuulaa.
Soomaalida iyo Mandiqaddeeda qaaliga ah halisyo badan baa weligood ba waajahnaa oo damac weyn ayaa waxuu ka hayay cadoow badan oo xeelad iyo xoog ba u adeegsanayay in ay aakhirka gacanta ku dhigaan. Waxaa jira nacab sokeeye oo cadowgaas had iyo jeeraale u gacan haatiyay oo waa jabhadda SNM iyo kuwa dhimirka iyo dareenka la’ ee qaddiyaddeeda faasidka ah cabsanaa. Inta ay gobta Hartiga loo yaqaanno geyiyadan woqooyi ku nool yihiin qiyaamaha oo dhaca ayaa ka sokeeya in dal mise dagal “Somaliland” lagu magacaabo carro Soomaaliyeed lagu arko oo lagu maqlo.
Ahmed Somali April 10, 2020 At 9:04 am
Bodhari Adeer been baad sheegtay WAXAA tiri; “Waxaa jira nacab sokeeye oo cadowgaas had iyo jeeraale u gacan haatiyay oo waa jabhadda SNM”. ≈©≈BEENLOW gormay dhacday taasi? ≈©≈MARKAA tiraah Biixi WAXAAD wax ka sheegtay Shaqsi ILA istaahila in wax laga sheego BALSE markaa tiraah SNM waxaa ku hoos duugan BEEL aan istaahilin in la masabito. WBT
Boodhari April 10, 2020 At 6:21 pm
Adeer oday SYL ka tirsanaa baad tahay oo sidaas ayaan kugu qaddariyaa runtii. Dood waynu wadaagi karnaa haddii aad diyaar u tahay laakiin oday cimrigaaga jooga aflagaaddo is ma dhaafsan karno oo damiirkaygu i siin maayo. Beenta aan sheegay caddeynteeda madasha soo dhig oo haddii aanad Isaaq ahayn afhayeen u ma noqon kartid. Aan ahayn waxaad isku caddeynaysaa in aad ugu xaglinayso filimkii caatada ahaa ee ay mooryaantii sida xun u eedday.
Ahmed April 10, 2020 At 8:04 pm
Maxaad duqa u xagxaganeysaa haduu runta kuu sheegay?
Hanoo hodhodho leyne nooga sheekee sababta kugu keliftey inaad qabiilkaaga ka cararto?
Ma markaan kugu idhi Budhleyn dhexdeeda waxba kama tihidiin. Dad masaakiin ah oo Booska lagu buuxsado oo iyagoo taaagana lakala gato ayaad ka tihiin meeshaas ayaad xamili kari weydey? Kkk
Waxey Majeerteenku beeciyaan sidii xoolihii ayaad tihiin ayaad ka xanaaqdey? Kkkk
Xamar waxaa la’idiinka yaqaanaan Majeerteen is mood. Wey idinka naxaan oo idinkuma yidhaahdaan, laakiinse kolkey idin arkaan wey idinku qoslaan. Waxaanad la mid yihiin ridii gadhka yar yeelatay ee orgiga is moodey. Kkkkk.
Garoowena ka daalik. Gambadhada Baarlamaanka ayaa la’idin fadhfadhiisiyaa oo kolba mid baa lagu sharaxaa kursigaas.kkkk Waa maqaamka Keli ah ee Madaxweyne walba oo soo maraa dhowr goor bedelo. Kiinii salka saani kursiga u dhigoba waa laga TAKHALUSAA. Kolkaas waa sharci la wada ogyahay oo kale. Gudoomiye walba oo Baarlamaan oo Budhleyn leedahay waa inuu kursiga dhinac kaga fadhiistaa. Hal qar oo Keli ah ayaa loo ogol yahay. Kkkkk
Qiso yar Baan kula wadaaqayaa. Berigii Budhleyn la dhisayay waxaa damac galay Mareexaankii oo yidhi Hawiye hanooga teginee Maamulka aad yagleeleysaan aan ka mid noqono. Majeerteenkii wey ku qosleen odayadii Mareexaan. Waxey ku yidhaahdeen MAYA cad. Kol labaad ayay 2000 nadii isku deydeen. Hadana MAYA qayaxan ooney naga raali ahaadana ku jirin ayay ku yidhaahdeen. Labo siba wey u diideen.
Waa marka hore Mareexaan Majeerteenka uma abaal gudan. Afweyne ayay is daad raaciyeen oo iney janadii galeen bey is moodeen. Waari meysee wax ha idinka hadhaana wey garan waayeen. Xitaa walaalahoodii kale Daarood Kursi Jaceyl ayay isku seegeen. Majeerteena garan waa kursiga ka hadh oo wax walba oo kale guro oo daaq laguuma diidanee. Wey daaqayeena. Xukun Jaceyl ayaa kursiguun u hilaaciyay. Afweynena illeyn mucangag kale ayuu ahaaye isna wuu ku taagsadey. Mareexaana sidaan idhi aar tolka ka daa tacadiga odeygii kumey odhane iyagaaba hormuud ka noqdey oo KURSIGOODII ayay difaacdeen.
Cadaawadaas hore ee soo dhex martey iyo Marexaanka oo siyaasada yaqaana oo kursiga ku qabsanaya Majeerteenka Budhleyn dhexdeeda ayay uga hor istaageen iney kasoo qeyb geliyaan Maamulkaas. Majeerteen waxey is tuseen in aanay kursiga isku cesh ceshan karin oo uu Mareexaanku ku qabsanayo. Siyaasadana la dheelayo. Dheelina yaqaano.
WELIGEED IYO WAAQEED MEY DHACDEEN IN NIN MAREEXAAN AHI INTUU XILKA USOO ISTAAGO HAL COD HELA SIDII CALI CIISE OO KALE. AMABA HAK CODBA HELI WAAYA.
Shardi ayay ka geli lahaayeen waxaas oo kale. Tusaale kale. Kolkuu Farmaajo yimid Budhleyn, Suldaankaaga Suldaan Siciid isagoo taagan oo xey ah ayaa la hareer mariyay oo Weftigii Farmaajo. Mareexaan Budhleyn ka mid ah iga walooney qaateen waxaas.
Waxeyse kale oo ay u riyaaqeen, u gacan haatiyeen oo ay soo dhaweysteen Dhulbahante iyo Warsangeli. Siiba Warsangeliga dhabta ayay saareen oo madaxa ayay u salaaxeen sidii ilmo Sebi ah oo ay dhaleen. Waayo waxey og yihiin iney Booskey undhiibaanba ka qaadi karaan. Waayo waa Baari. Dhulbahante kuma dhacaan iney Madaxweyne ku xigeenka ka qaadaan. Haa wey ka aamusi oo ku giijin, laakiinse sidey idinka idiinka TAKHALUSAAN oo kale kuma sameyn karaan. Kkkkk Laakiinse Reerkiina Cismaanow Kursi ku sheeg. Haa Gambadh ayaa meel loo dhigey oo lagu yidhi kaasaad leedihiine ku fadhiista. Laakiin shardi ayaa la daba dhigey. Kaasoo ah nin walba oo idinka mid ihi salka toos u dhigi kari maayo. Waa in marka Bedeluu ay timaado uu degdeg uga kacaa. Ka cararaa oonu xitaa dib usoo jaleecin. Kkkkkkk
axmed April 10, 2020 At 9:49 pm
iidoor waxa uu Farmaajio u diidan yahay, waa daarood neceyb. laakiin ha ogaadaan Farmaajio in uu madaxweyne ka yahay Somaliya. waa dad xikmad yar, beena dadkooda u sheega, iyaga oo ig in ay dhibaata badan iyagu geysteen, ragii hargeysa iyo Borama Laascaano Ka geystey ,ay wali nool yihiin ee hadlayaan waliba.
Ahmed April 10, 2020 At 10:39 pm
Farmaajo waa doqon nasiib u yeeshay inuu xilka qabto. Dabadeedna isagoon meelna xukumin is moodey Madaxweyne dhaba. Ma noo sheegi kartaa waxaad ka ogtahay heshiiayada uu galo Farmaajo. Isagoo idin iibiyay oo gebigiinuba aad rahman tihiin ayey daan hadana ka war heynba. Isma’og aqalkii bey asleysaa. Kkkk
Anaga Iidoor ahaan waxaad doonto nagu dheh ama naga sheeg. Walaa Abiye walaa Trump ayaanan noosoo xambaari Karin Farmaajo ama Kheyre. Diyaarad iyo Garoonka Cigaal International Airport kasoo degbaad sheegeysaaye, Abiy isagoo sida Oromada tahriibka ay noogu soo gasho isagoo xambaarsan lug xuduuda Farmaajo ama Kheyre kasoo geli is yidhaahdo, Askariga Somaliland ee hayada socdaalka Qaranka u qaanilsan baa bartaas ka celinaya isagoonan xitaa taliyihiisa goobta ka wargelin. Shalaytoole ayay Gole Fagaare ah oo Dawlada Somaliland oo dhami ku dhan tahay. Xukuumadii, labadii aqal ee baarlamaanka iyo labadii xisbiba ee mucaaradka ahaaba uu Feysal Cali Waraabe ka yidhi Abiy ga Oromka ahi haduu rabo Soomaali weyn ha soo fasaxo kililka Soomaalida, Cimaaciil Cumar Geelena ha keeno Jabuuti. Inagoo Soomaali ah oo Dal weyn ah ayaynu integrationka ama isdhexgalka ay wadaan kaga qeyb qaadanaynaa. Hadal meeahaas laga yidhi waa kii ugu miisaanka badnaa. Abiy horaa maya aanu u nidhi. Imikana maya baanu ku leenahay. Warkayaguna waa cad yahay. Cidina waxanaan rabin na marsiin meyso.
Taas iyo taanoba toos makuu tusay. Tabeelehaas aan ku tiiriyo.
Kolkàas Axmedow bal madaxaaga ayaaba shaki ku jiraaye bal baadh baadh in Farmaajo idin iibiyay beri hore oo saxeex cidaan la garaneyn qalinka ugu duugey. Ka dib idinku Soo noqdey oo shib idiin yidhi sidiisii. Kkkkkk
Boodhari April 10, 2020 At 11:05 pm
Puntland in ay xildhibaano iyo aagasimeyaal Mareexaan iyo Ogaadeen ka soo jeeda ka soo ahaayeen waa marag ma doonto ee beenta iyo barabagaanka iidoor naga daa saaxiib. Haddii aanay toos uga mid ahayn waa dhaxaltooyo ay wax ku leeyihiin ee sidaas u la soco diradiraaloow.
Saaxiib Majeerteenkan, Warsangaligan, Dhulbahantahan, Marexaankan iyo guud ahaan ba Daaroodweynaha aad ka dhex kalluumeysanayso wax ay kala yihiin ma jirto oo waa ul iyo diirkeed aan la kala siibi karin. Adigu isku dirkooda iyo kala qoqobkooda waa qaddiyaddaada faasidka ee indhaha la’ ee xaasidnimada iyo xiqdiga gaamuray salka ku haysa. Qabiil iska caadi ah baad tahay abid qaran dunida ka jira noqon maysid Ahmedoow haddii ay xataa Daaroodku mandiqadda Soomaaliyeed gabi ahaantiisa ba ka guuraan oo ay qaarad kale soo degaan. Halkaagii uun baad ahaanaysaa maandhe.
Waan kaa tacsiyeynayaa shoogga iyo naxdinta kaa soo gaadhay in aan Nugaal iyo Garoowe asal ahaantayda si dhab ah uga soo jeedo aan se Sanaag wax badan la wadaago. Way dhacdaa taasu waa iska caadi Isaaq iyo Majeerteen is dhal dhalay. Soomaaliduna badankeedu waa wiil iyo abtigii iyo sebi iyo ayeeyadii. Waa buux meel kasta ee xumadda iska dhin jaalle. Warsangali iyo Majeerteen labo inamood oo isku hooyo iyo isku aabbe ah bay ka soo faracmeen. Maxay kuugu kala duwan yihiin?